But too many ifs and - 英語 - ビルマ語 翻訳と例
検索ワード: but too many ifs and buts !!! (英語 - ビルマ語)
Avoid overloading students and parents by asking them to download and test too many applications or platforms.
ကျောင်းသားများနှင့် မိဘများကို အပလီကေးရှင်းအများအပြား သို့မဟုတ် ပလက်ဖောင်းအမြောက်အများကို ဒေါင်းလုဒ်ပြုလုပ်ခိုင်းခြင်း၊ စမ်းသပ်ရန်တောင်းဆိုခြင်းဖြင့် ဝန်ပိစေခြင်းကို ရှောင်ရှားပါ။
ထာဝရဘုရားကလည်း၊ သင်၌ပါသော လူတို့သည် အလွန်များ၍၊ သူတို့လက်၌ မိဒျန်လူတို့ကို ငါမအပ်ရ။ အပ်လျှင် ဣသရေလအမျိုးက၊ ငါ့လက်ရုံးသည် ငါ့ကိုကယ်တင်ပြီဟု ငါ့တဘက်၌ ဝါကြွား လိမ့်မည်။
တဖန် ထာဝရဘုရားကလည်း၊ လူတို့သည် အလွန်များသေး၏။ ရေဆိပ်သို့ ခေါ်ခဲ့လော့။ သူတို့ကို ရေဆိပ်မှာ သင့်အဘို့ ငါစုံစမ်းမည်။ ထိုအခါ ဤမည်သောသူသည် သင်နှင့်အတူ သွားရမည်ဟု ငါဆိုလျှင်၊ ထိုသူသည် သွားရမည်။ ဤမည်သော သူမသွားရဟု ငါဆိုလျှင် ထိုသူသည် မသွားရဟု မိန့်တော်မူသည်အတိုင်း၊
tower (英語>ヒンズー語)afstand (オランダ語>英語)értéktőzsdéről (ハンガリー語>日本語)uyire meaning (英語>タミル語)larutan (インドネシア語>アラビア語)staufen (英語>ドイツ語)elingigita (エスペラント語>タイ語)i miss you (英語>アラビア語)how can i address you (英語>タガログ語)druhkalkany (チェコ語>ドイツ語)foer (デンマーク語>ラトビア語)станичников (ロシア語>英語)이응경섹스비디오 (韓国語>英語)wurde (スロバキア語>チェコ語)influence (英語>タガログ語)kasingkahulugan ng madilim (タガログ語>英語)ingoiati (イタリア語>フランス語)ordinarie (スウェーデン語>英語)toll (ポルトガル語>英語)mcafee (ドイツ語>英語)buka mulut (マレー語>簡体字中国語)kya aap mere ko pasand karti ho (ヒンズー語>英語)nisan (英語>アラビア語)jelito cienkie (ポーランド語>フランス語)ditugaskan (マレー語>簡体字中国語)